thinzar's blog: August 2014
အလုပ်ပြောင်းတဲ့အကြောင်း ရေးထားတဲ့ပို့စ် ကို အားပေးတဲ့သူများတော့ confessions စီးရီးစ်အလိုက် ဆက်ရေးဖို့ စဉ်းစားထားတယ်။ :D ခုလောလောဆယ်တော့ အင်တာဗျူးအတွေ့အကြုံတွေ ရှဲပေးပါလို့ တောင်းဆိုတဲ့သူရှိလို့ အင်တာဗျူးတွေအကြောင်း အရင်ရေးပါမယ်။ ရေးမယ်သာပြောရတာ၊ share စရာ အတွေ့အကြုံကလည်း အဲလောက်အများကြီး မရှိဘူးရယ်။
အလုပ်တစ်ခုတည်းမှာ ခြောက်နှစ်တောင် ကြာသွားရခြင်း အကြောင်းရင်းထဲမှာ အင်တာဗျူးမသွားချင်တာလည်း ပါတယ်။ (နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုး လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားတာ နည်းနည်း ကြာသွားတာ။ :D) အရင်ပို့စ်မှာ ရေးခဲ့သလိုဘဲ၊ ပထမအလုပ်က language ပေါင်းစုံနဲ့ ဗျောက်သောက်ရေးခဲ့ရတော့ တစ်ခုခုကို မကျွမ်းကျင်နေတော့ language-specific detail တွေလာမေးရင် ဖြေနိုင်ဖို့ သိပ်မလွယ်ဘူးဆိုတာ သိနေတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်က speaking skill/social skill တော်တော်ည့ံ့တဲ့သူတစ်ယောက် ဆိုပါတော့။ IELTS ဖြေတာတောင် ကျန်တဲ့ skill တွေ 7.5/8.0 ရပေမယ့် speaking skill က ၆.၅ ကို မကျော်ဘူး။ အင်တာဗျူးကို စကားနဲ့မဖြေရဘဲ လက်နဲ့ရေးဖြေလို့ရရင် ကောင်းမှာဘဲလို့ အမြဲစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတယ်။
အလုပ်အင်တာဗျူးဆိုတာ အလုပ်လုပ်ပြီး ခြောက်နှစ်ကြာတဲ့အထိ တစ်ခုမှ ဟုတ်တိပါတ်တိ သွားဖူးတာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ ပထမအလုပ် ကလည်း ကျောင်းတက်တုန်းက အလုပ်သင် ခြောက်လဆင်းခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ သူတို့က ကျောင်းပြီးရင် လာလုပ်ဆိုပြီး တစ်ခါတည်း ခန့်လိုက်တော့ လုပ်ဖြစ်သွားတာ။ ကြားထဲမှာ စိတ်ကူးပေါက်တိုင်း စင်ကာပူကို အလုပ်လှမ်းလျှောက်တဲ့အခါ skype နဲ့ဖြေရတဲ့ အင်တာဗျူးလေးတွေတော့ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေက technical တွေများတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ အရင်က အလုပ်လျှောက်ဖူးပေမယ့် အင်တာဗျူးမသွားခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေ ဖုန်းဆက်လာပြီး အင်တာဗျူးလာဖြေဖို့ ပြောတယ်။ ကိုယ်လည်း အလုပ်ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံနေတော့ လာမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ပြောရရင် ဘဝမှာ ပထမဆုံးသွားဖူးတဲ့ formal အလုပ်အင်တာဗျူးဘဲ။ အင်တာဗျူးလာဖို့ မနက်ကိုးနာရီချိန်းတယ်။ အချိန် သုံးလေးနာရီလောက်ကြာမယ်၊ အလုပ်ကနေ နေ့တစ်ဝက်ခွင့်ယူခဲ့ပါလို့ ကြိုပြောတယ်။ အရင်လျှောက်ဖူးတဲ့ position က Android developer ဆိုတော့ Java concept တွေတော့ နည်းနည်းပြန်ဖတ်လိုက်တယ်။ လေးရက်လောက်ဘဲ ကြိုပြောတာဆိုတော့ ဘာမှတောင် ပြင်ဆင်ချိန် မရှိလိုက်ဘူး။
အင်တာဗျူးနေ့ ရောက်သွားတော့ aptitute test အရင်ဖြေရတယ်၊ အဲဒါက လွယ်တယ်။ အချက် ၁၅ချက်ပေးထားြပီး ကိုယ့်အတွက် အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကို နံပါတ်စဉ်ပြန်စီခိုင်းတာ။ ဥပမာ-လခ၊ ရာထူး၊ အလုပ်အပေါ် စိတ်ကြေနပ်မှု၊ ဘာညာသာရကာပေါ့။ ြပီးတော့ psycho test မေးခွန်းစာရွက်တွေ လာပေးပြန်ရော။ အဓိက ပရောဂျက်တွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မယ်၊ colleague တွေနဲ့ ပြဿနာတက်ရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်၊ ပြီးတော့ အရင်က ကြုံတွေခဲ့ဖူးတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံတွေရေးခိုင်းတယ်။ အများကြီးဘဲဖြေလိုက်ရတယ်။ ဖြေလို့မပြီးခင် recruiter ရောက်လာပြီး "ဆောရီးပါ၊ ဒီနေ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး fire drill လေ့ကျင့်မှုရှိလို့ ခဏနေ အရေးပေါ်အချက်ပေးသံကြားရင် staff တွေနဲ့အတူ emergency လှေကားကနေ လိုက်ဆင်းပြီး စုရပ်ကို သွားပေးပါ" တဲ့။ ကိုယ့်မှာ အင်တာဗျူးဖြေနေရင်း အူကြောင်ကြောင် ကိုးထပ်ကနေ လှေကားနဲ့ဆင်းပြီး စုရပ်ထိ လျှောက်လိုက်ရသေးတယ်။ တကယ့်ကို မကြုံစဖူး မှတ်မှတ်ရရ အင်တာဗျူးဘဲ။ ပြန်တက်လာတော့ IQ test ဆက်ဖြေရတယ်။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုက ဘာခေါ်လဲ မသိဘူး။ ဒီလို မေးခွန်းမျိုးတွေ ဖြေရတာ--
- What are your weakness?
- How do you think you can contribute to the company?
စသဖြင့် ပုံမှန် အခြားအင်တာဗျူးတွေမှာဆိုရင် လူချင်းတွေ့ ဖြေရမယ့်မေးခွန်းမျိုးတွေကို စာရွက်ထဲ ရေးဖြေခိုင်းတာ။ ဘဝမှာ အင်တာဗျူးကို ရေးပြီးဖြေချင်တဲ့ ဆန္ဒ ပြည့်ဝသွားတယ်လို့ ပြောရမယ်။ :D အဲဒါတွေကို ပါးစပ်နဲ့ဖြေရရင် ကောင်းကောင်းြပင်ဆင်ထားခဲ့ရင်တောင် အနည်းနဲ့အများ အခက်အခဲတွေ့တတ်တယ်ထင်တာဘဲ။ ရေးပြီးဖြေခိုင်းတာမျိုးနဲ့ ကြုံရတာ တော်တော် ကံကောင်းသွားတယ် ပြောရမယ်။
နောက်တော့ Technical Director ရောက်လာတယ်။ ဘာကြောင့် အလုပ်ပြောင်းချင်တာလဲမေးတယ် ြပီးတော့ ဘာကြောင့် Android developer ဖြစ်ချင်ရသလဲတဲ့။ နောက် အရင်လုပ်ဖူးတဲ့ ပရောဂျက်တွေအကြောင်း မေးတယ်။ သူနဲ့က ဖြေရတာ အကုန် အဆင်ပြေလိုက်တယ်။ ခုနက ဖြေထားတဲ့ Technical test မှာ language တွေအကုန် ခေါင်းထဲမှာရောသွားလို့ မဖြေနိုင်ဘူးလို့တော့ ဝန်ခံလိုက်တယ်။ နောက် HR manager မေးတဲ့ အလှည့်ရောက်လာရော။ အင်တာဗျူးမလာခင် ဖြည့်ခဲ့ခိုင်းတဲ့ ဖောင်ကိုကြည့်ပြီး background check သဘောမျိုး စုံစိနေအောင် မေးတော့တာဘဲ။ ြမန်မာပြည်က အစိုးရကိုတောင် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အဲလောက်အများကြီး မပေးဖူးဘူး။ :D နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း Do you have any question for us ဆိုတာ။ အရင်က တစ်နေရာမှာဖတ်ဖူးပြီး သဘောကျတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုအတိုင်းဘဲ ပြန်မေးလိုက်တယ်။ အကယ်လို့ ငါ့ကို ဒီ position မှာ အလုပ်ခန့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ငါ့ဆီကနေ ဘယ်လောက်ထိ မျှော်လင့်ထားသလဲ? ပေါ့.. ြပီးတော့ recruiter ကို "ငါ့ကို ဘာကြောင့် အင်တာဗျူးလာဖို့ ဖုန်းဆက်တာလဲ" ဆိုပြီး မေးလိုက်တယ်။ :D သူက "ငါက ဒါမျိုးတွေ ကျွမ်းတယ်လေ" လို့ ဖြေတယ်။ နောက်တော့ လစာညှိတယ်၊ သူပေးချင်တဲ့လခနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့လခရဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာ စျေးတည့်သွားတယ်။
မနက်ကိုးနာရီကတည်းကစတဲ့ အင်တာဗျူးက နေ့လည် ၂နာရီလောက်မှ ြပီးသွားတယ်။ ကြားထဲမှာ လှေကား အတက်အဆင်းကလည်း လုပ်လိုက်ရသေးတော့ လူက တော်တော်ကို ပင်ပန်းပြီး ဗိုက်တောင် ဆာသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ရက်မှာဘဲ အလုပ်ခန့်တဲ့အကြောင်း ဖုန်းဆက်လာတော့ ပင်ပန်းရကျိုးနပ်သွားပါတယ်။
နောက်အင်တာဗျူးတစ်ခုကတော့ Java နဲ့ပါတ်သက်ပြီး technical questions တွေအများကြီးကို ကျောင်းမှာ စာမေးပွဲဖြေသလိုမျိုး ဖြေရတာ။ သိပ်မဖြေနိုင်ဘူး။ ကျန်တဲ့ aptitute test တွေ ဘာတွေက ခပ်ဆင်ဆင်တွေဘဲ။ ဟိုအလုပ်ရသွားတော့ နောက်တစ်ခုရဲ့ second interview ဆက်မသွားတော့တာ။ စုစုပေါင်းမှ တစ်ခုဘဲရှိတဲ့ အင်တာဗျူးအတွေ့အကြုံ ဒီမှာဘဲ ပြီးပါတယ်။ အခြားသူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ရီချင်စရာကြီးတောင် ဖြစ်နေမလား မသိဘူး။
အင်တာဗျူးက တစ်ခုသွားပြီးတာနဲ့ ကျန်တာတွေကို သွားရမှာ မကြောက်တော့ဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ တော်တော်ကံကောင်းလို့ အလုပ်ရသွားတာလို့ ယူဆတာဘဲ။ နောက်များမှာတော့ Java Interview Questions တွေကို အြပန်ြပန် အလှန်လှန် ကြေညက်အောင် ဖတ်သွားမယ်လို့တော့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ Job Market မှာ ကြည့်ရတာ Java, J2EE ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ လခတော်တော်ကောင်းတာကို သတိထားမိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်တော့ technical ပိုင်းအရ သိပ်အားမရသေးဘူး။ တော်တ​ော်ကြိုးစားရဦးမယ်။